चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो नेता ज्यू र ? - NepalKhoj
चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो नेता ज्यू र ?
नेपालखोज २०७६ कार्तिक २८ गते १४:३५
२८ कार्तिक, रुपन्देही । चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो नेता ज्यू ? जनताले यस्तो प्रश्न सोध्दा प्राय : नेताहरुको बोली नै बन्द हुन्छ । कतिपय नेताको शिर निहुरिन्छ । केहीले असहज परिस्थितिलगायतका कारण देखाएर जनताका प्रश्न थामथुम गर्ने प्रयास गर्छन् । तर, रुपन्देहीमा भने त्यस्तो भएन । चुनावी प्रतिबद्धताको समीक्षासहितको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जनताका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित भएका यहाँका नेताले शिर ठाडो पारेर बोले । नेताहरुले चुनावी प्रतिबद्धताअनुरुप भइरहेका विकासे आयोजनाको फेहरिस्त जनता सामु राख्दा यहाँका सर्वसाधारण खुशी हँुदै ताली बजाए ।
नमस्ते नेपाल नामक संस्थाले शङ्करनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा रुपन्देही क्षेत्र नं– २ का सांसद विष्णु पौडेल, क्षेत्र नं २ का प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरी र तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेलाई निम्ता गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा आयोजकले चुनावअघि जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दा सांसद विष्णु पौडेलले आफूले सम्पन्न गरेका कामको लामो सूची प्रस्तुत गरे । गौतमबुद्ध अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगतिदेखि भैरहवा बुटवल ६ लेन सडक, अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र, सरकारी मेडिकल कलेज, तिनाउ नदीमा निर्माण भइरहेका पाँचवटा पक्की पुल, ४ लेन बन्दै गरेको बुटवलकोे कालीकापथ, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, बेलवास नुवाकोट तथा बेथरी बेलवास पर्यटन सडक, बुटवल र सैनामैनाका नगर परिक्रमा पथलगायतका ठूला–ठूला विकासे आयोजनाका प्रगतीका विषयमा जानकारी दिए।
सो अवसरमा महासचिब पौडेलले आफ्नो अभिभारा काँधमा बोकेर नेकपा नेतृत्वको सरकार अगाडि बढेकाले जनताले यसको सही मूल्याङ्कन गर्ने धारणासमेत राखे । “हामीले चुनाबमा गरेका प्रतिबद्धता सिरानीमा राखेर यहाँहरुले अध्ययन गरिदिनुहोला”, महासचिव पौडेलले भन्नुभयो,“ ६० महिनापछि प्रतिबद्धताको समीक्षाका लागि फेरि आउनेछौ ।”
कार्यक्रममा प्रदेश–५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले प्रदेश– ५ लाई मुलुककै नमूना प्रदेशको रुपमा निर्माण गर्नका लागि काम अघि बढाएको बताउँदै आर्थिक प्रगति र कामका हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश अगाडि रहेको बताए । मन्त्री गिरीले रुपन्देहीका विभिन्न स्थानलाई शहरीकरणकोरुपमा विकास गर्नका लागि सडक, खानेपानी, ढल निकास र सञ्चारको विस्तारका लागि स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको बताए । मन्त्री गिरीले प्रदेशको समृद्धिका लागि पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजना र कार्यक्रम तय गरेको उल्लेख गरे ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले पनि नगरको विकासका लागि भइरहेका गतिविधिको लामै सूचि पेश गरे । स्थानीय तहमै पहिलो पटक तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको तिलोत्तमाले प्रस्ताव गरिएका २२ वटा परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रमुख घिमिरेले बताए । नगरले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलाई जोड दिँदै विभिन्न कार्यक्रम बनाएको बताए।
कतिपय समस्या रहे पनि अधिकांश राम्रा काम भएको स्थानीय मतदाता देवी वाग्लेले बताउनुभयो । खासगरी सांसद पौडेल र नगर प्रमुख घिमिरेले यहाँको विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै मतदातले प्रशंसा गरे । – नीरा गौतम